အနာရှတျအဟောငျးတှေ ပြောကျကငျးအောငျ ဘယျလိုလုပျကွမလဲ | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
အနာရှတျအဟောငျးတှေ ပြောကျကငျးအောငျ ဘယျလိုလုပျကွမလဲ
တခြို့ကတြော့လညျး ကိုယျ့မှာ အနာရှတျတှရှေိနတော ဘာမှမဖွဈပမေယျ့ တခြို့တှကေတြော့ အနာရှတျတှကေ ရုပျဆိုးလို့ အနာရှတျမရှိဘဲ ပြောကျခငျြကွပါတယျ။
အနာရှတျအဟောငျး ပြောကျခငျြတယျဆိုရငျတော့ အနာရှတျဆိုတာ ဘာလဲဆိုတာနဲ့ ပြောကျခငျြတာက ဘာအနာရှတျအမြိုးအစားလဲဆိုတာကို သိဖို့လိုပါတယျ။
ထိခိုကျဒဏျရာ တဈခုခုရပွီးသှားရငျ အနာကကျြတဲ့သဘာဝဖွဈစဉျရဲ့ တဈစိတျတဈပိုငျးအနနေဲ့ အမာရှတျ ဖွဈလာပါတယျ။ အရပွေားရဲ့ ဒုတိယအလှာ ပကျြစီးပွီးတော့ ဒါကိုပွနျပွငျဖို့အတှကျ collagen fibers တှေ ပျေါလာပွီးနောကျမှာ အနာရှတျထငျစပေါတယျ။
● အမြားအားဖွငျ့တော့ အနာကကျြမွနျလလေေ collagen စုပုံတာ နညျးပွီးတော့ အနာရှတျထငျတာလညျး နညျးပါတယျ။
● အနာရှတျထငျတာ မြား၊ မမြားဆိုတာက ထိခိုကျဒဏျရာ ပွငျးထနျမှုအပျေါ မူတညျပါတယျ။
● ခန်ဓာကိုယျအစိတျအပိုငျး အမြိုးမြိုးမှာဖွဈတဲ့ အနာရှတျတှမေတူကွပါဘူး။
● ဒါ့အပွငျ အသကျအရှယျပျေါ လိုကျပွီးတော့လညျး အနာရှတျပုံစံတှေ မတူပွနျပါဘူး။ အနာရှတျအမြိုးမြိုး ရှိပါတယျ။
>> အနာရှတျတှကေို ဖယျရှားပေးနိုငျမယျ့ နညျးလမျး (၈) မြိုး
1. ရှားစောငျးလကျပတျရဲ့ အပွငျခှံကိုခှာပွီးတော့ အတှငျးက အနှဈလေးတှကေို ခွှဈထုတျပါ။
2. ရှားစောငျးလကျပတျ အနှဈလေးကို အမာရှတျပျေါမှာ စကျဝိုငျးပုံစံ ပှတျလိမျးပါ။
3. နာရီဝကျလောကျကွာရငျ ရအေေးအေးလေးနဲ့ဆေးခပြါ။
4. တဈနေ့ နှဈကွိမျ လိမျးပေးပါ။
1. အိပျရာမဝငျခငျမှာ အနာရှတျကို ပြားရညျ လိမျးပေးပွီး ပတျတီးလေး စညျးထားပေးပွီး တဈညလုံး ထားထားပါ။
2. မနကျရောကျတဲ့အခါမှာ ပတျတီးကို ဖယျလိုကျပွီးတော့ ရနှေေးနှေးလေးနဲ့ ပြားရညျတှကေို ဆေးခပြါ။
3. ညတိုငျး လုပျပေးပါ။
1. အုနျးဆီ စားပှဲတငျဇှနျး အနညျးငယျကို အပူပေးပါ။
2. အနာရှတျပျေါကို ၁၀ မိနဈလောကျ ပှတျပွီး လိမျးပေးပါ။
3. တဈနာရီလောကျ ထားလိုကျပါ။
4. ဒါကို တဈနကေို့ ၂ ကွိမျကနေ ၄ ကွိမျအထိ နတေို့ငျးလုပျပေးပါ။
● Apple cider vinegar (ပနျးသီးရှာလကာရညျ)
1. ပေါငျးခံရေ စားပှဲတငျဇှနျး ၄ ဇှနျးကို apple cider vinegar စားပှဲတငျဇှနျး ၂ ဇှနျးနဲ့ ရောစပျပါ။
2. ဒီထဲကို ဂှမျးလုံးလေး ထညျ့ပွီးတော့ ဒီဂှမျးလုံးနဲ့ အမာရှတျပျေါကို ပှတျလိမျးပေးပါ။
3. ပွီးရငျ ခွောကျသှားပါစေ။
4. ညတိုငျး အိပျရာမဝငျခငျမှာ ဒီလိုလိမျးပေးပွီးတော့ မနကျမှာ ဆေးကွောသနျ့စငျပါ။
1. လတျဆတျတဲ့ သံပရာသီးတဈစိတျကို လှီးပွီးတော့ အမာရှတျပျေါမှာ ညငျသာစှာ ပှတျတိုကျပေးပါ။ ပှတျတိုကျနတေုနျးမှာ သံပုရာရတှေကေို အမာရှတျပျေါကို ညှဈခပြေးပါ။
2. ၁၀ မိနဈလောကျ ထားပွီးတော့ ရအေေးနဲ့ ဆေးခပြါ။
3. နတေို့ငျး လုပျနကေအြခြိနျမှာ လုပျပေးပါ။
1. အာလူးကို မထူမပါး အနတေျော အခပျြလေးတှေ လှီးဖွတျပါ။
2. အာလူးခပျြလေးတှကေို အမာရှတျပျေါမှာ စကျဝိုငျးပုံစံပှတျပွီး လိမျးပေးပါ။
3. အာလူးခပျြလေးတှေ ခွောကျစပွုလာပွီဆိုရငျ ဒါကို လှငျ့ပဈလိုကျပွီး နောကျတဈခပျြနဲ့ ပှတျပါ။
4. မိနဈ ၂၀ လောကျ ပှတျပေးပွီးတော့ ၁၀ မိနဈလောကျ အခွောကျခံထားပါ။
5. ပွီးရငျ ရအေေးနဲ့ ဆေးပါ။
6. တဈနကေို့ တဈကွိမျ လုပျပေးပါ။
1. မုနျ့ဖုတျဆိုဒါ စားပှဲတငျဇှနျး ၂ ဇှနျးကို ပဈြပဈြလေးဖွဈတဲ့အထိ ပေါငျးခံရနေဲ့ ရောလိုကျပါ။
2. အမာရှတျကို ပေါငျးခံရနေဲ့ စိုအောငျလုပျပွီးတော့ အခုနရောထားတာလေး လိမျးပေးပါ။
3. ၁၅ မိနဈလောကျ ထားပွီးတော့ ရဆေေးခပြါ။
4. ၁ ရကျခွားတဈခါ လုပျပေးပါ။
အပျေါကနညျးလမျးတှသေုံးဖို့ ရှုပျတယျဆိုရငျ လှယျကူတဲ့နညျးလေး ပွောပွပါမယျနျော။
1. အနာရှတျနရောကို Bio-Oil နစေ့ဉျ လိမျးပေးပါ။
2. ရဆေေးခစြရာလညျး မလိုပါဘူး။
3. ရရှေညျစှဲသုံးပေးမယျဆိုရငျ အနာရှတျတှေ သကျသာလြော့ပါးလာမယျ့အပွငျ အသားအရပေါ စိုပွညျလှပလာပါလိမျ့မယျ။
တချို့ကျတော့လည်း ကိုယ့်မှာ အနာရွတ်တွေရှိနေတာ ဘာမှမဖြစ်ပေမယ့် တချို့တွေကျတော့ အနာရွတ်တွေက ရုပ်ဆိုးလို့ အနာရွတ်မရှိဘဲ ပျောက်ချင်ကြပါတယ်။
အနာရွတ်အဟောင်း ပျောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အနာရွတ်ဆိုတာ ဘာလဲဆိုတာနဲ့ ပျောက်ချင်တာက ဘာအနာရွတ်အမျိုးအစားလဲဆိုတာကို သိဖို့လိုပါတယ်။
ထိခိုက်ဒဏ်ရာ တစ်ခုခုရပြီးသွားရင် အနာကျက်တဲ့သဘာဝဖြစ်စဉ်ရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေနဲ့ အမာရွတ် ဖြစ်လာပါတယ်။ အရေပြားရဲ့ ဒုတိယအလွှာ ပျက်စီးပြီးတော့ ဒါကိုပြန်ပြင်ဖို့အတွက် collagen fibers တွေ ပေါ်လာပြီးနောက်မှာ အနာရွတ်ထင်စေပါတယ်။
● အများအားဖြင့်တော့ အနာကျက်မြန်လေလေ collagen စုပုံတာ နည်းပြီးတော့ အနာရွတ်ထင်တာလည်း နည်းပါတယ်။
● အနာရွတ်ထင်တာ များ၊ မများဆိုတာက ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ပြင်းထန်မှုအပေါ် မူတည်ပါတယ်။
● ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်း အမျိုးမျိုးမှာဖြစ်တဲ့ အနာရွတ်တွေမတူကြပါဘူး။
● ဒါ့အပြင် အသက်အရွယ်ပေါ် လိုက်ပြီးတော့လည်း အနာရွတ်ပုံစံတွေ မတူပြန်ပါဘူး။ အနာရွတ်အမျိုးမျိုး ရှိပါတယ်။
>> အနာရွတ်တွေကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်မယ့် နည်းလမ်း (၈) မျိုး
1. ရှားစောင်းလက်ပတ်ရဲ့ အပြင်ခွံကိုခွာပြီးတော့ အတွင်းက အနှစ်လေးတွေကို ခြှစ်ထုတ်ပါ။
2. ရှားစောင်းလက်ပတ် အနှစ်လေးကို အမာရွတ်ပေါ်မှာ စက်ဝိုင်းပုံစံ ပွတ်လိမ်းပါ။
3. နာရီဝက်လောက်ကြာရင် ရေအေးအေးလေးနဲ့ဆေးချပါ။
4. တစ်နေ့ နှစ်ကြိမ် လိမ်းပေးပါ။
1. အိပ်ရာမဝင်ခင်မှာ အနာရွတ်ကို ပျားရည် လိမ်းပေးပြီး ပတ်တီးလေး စည်းထားပေးပြီး တစ်ညလုံး ထားထားပါ။
2. မနက်ရောက်တဲ့အခါမှာ ပတ်တီးကို ဖယ်လိုက်ပြီးတော့ ရေနွေးနွေးလေးနဲ့ ပျားရည်တွေကို ဆေးချပါ။
3. ညတိုင်း လုပ်ပေးပါ။
1. အုန်းဆီ စားပွဲတင်ဇွန်း အနည်းငယ်ကို အပူပေးပါ။
2. အနာရွတ်ပေါ်ကို ၁၀ မိနစ်လောက် ပွတ်ပြီး လိမ်းပေးပါ။
3. တစ်နာရီလောက် ထားလိုက်ပါ။
4. ဒါကို တစ်နေ့ကို ၂ ကြိမ်ကနေ ၄ ကြိမ်အထိ နေ့တိုင်းလုပ်ပေးပါ။
● Apple cider vinegar (ပန်းသီးရှာလကာရည်)
1. ပေါင်းခံရေ စားပွဲတင်ဇွန်း ၄ ဇွန်းကို apple cider vinegar စားပွဲတင်ဇွန်း ၂ ဇွန်းနဲ့ ရောစပ်ပါ။
2. ဒီထဲကို ဂွမ်းလုံးလေး ထည့်ပြီးတော့ ဒီဂွမ်းလုံးနဲ့ အမာရွတ်ပေါ်ကို ပွတ်လိမ်းပေးပါ။
3. ပြီးရင် ခြောက်သွားပါစေ။
4. ညတိုင်း အိပ်ရာမဝင်ခင်မှာ ဒီလိုလိမ်းပေးပြီးတော့ မနက်မှာ ဆေးကြောသန့်စင်ပါ။
1. လတ်ဆတ်တဲ့ သံပရာသီးတစ်စိတ်ကို လှီးပြီးတော့ အမာရွတ်ပေါ်မှာ ညင်သာစွာ ပွတ်တိုက်ပေးပါ။ ပွတ်တိုက်နေတုန်းမှာ သံပုရာရေတွေကို အမာရွတ်ပေါ်ကို ညှစ်ချပေးပါ။
2. ၁၀ မိနစ်လောက် ထားပြီးတော့ ရေအေးနဲ့ ဆေးချပါ။
3. နေ့တိုင်း လုပ်နေကျအချိန်မှာ လုပ်ပေးပါ။
1. အာလူးကို မထူမပါး အနေတော် အချပ်လေးတွေ လှီးဖြတ်ပါ။
2. အာလူးချပ်လေးတွေကို အမာရွတ်ပေါ်မှာ စက်ဝိုင်းပုံစံပွတ်ပြီး လိမ်းပေးပါ။
3. အာလူးချပ်လေးတွေ ခြောက်စပြုလာပြီဆိုရင် ဒါကို လွှင့်ပစ်လိုက်ပြီး နောက်တစ်ချပ်နဲ့ ပွတ်ပါ။
4. မိနစ် ၂၀ လောက် ပွတ်ပေးပြီးတော့ ၁၀ မိနစ်လောက် အခြောက်ခံထားပါ။
5. ပြီးရင် ရေအေးနဲ့ ဆေးပါ။
6. တစ်နေ့ကို တစ်ကြိမ် လုပ်ပေးပါ။
1. မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါ စားပွဲတင်ဇွန်း ၂ ဇွန်းကို ပျစ်ပျစ်လေးဖြစ်တဲ့အထိ ပေါင်းခံရေနဲ့ ရောလိုက်ပါ။
2. အမာရွတ်ကို ပေါင်းခံရေနဲ့ စိုအောင်လုပ်ပြီးတော့ အခုနရောထားတာလေး လိမ်းပေးပါ။
3. ၁၅ မိနစ်လောက် ထားပြီးတော့ ရေဆေးချပါ။
4. ၁ ရက်ခြားတစ်ခါ လုပ်ပေးပါ။
အပေါ်ကနည်းလမ်းတွေသုံးဖို့ ရှုပ်တယ်ဆိုရင် လွယ်ကူတဲ့နည်းလေး ပြောပြပါမယ်နော်။
1. အနာရွတ်နေရာကို Bio-Oil နေ့စဉ် လိမ်းပေးပါ။
2. ရေဆေးချစရာလည်း မလိုပါဘူး။
3. ရေရှည်စွဲသုံးပေးမယ်ဆိုရင် အနာရွတ်တွေ သက်သာလျော့ပါးလာမယ့်အပြင် အသားအရေပါ စိုပြည်လှပလာပါလိမ့်မယ်။